आफ्नै साथी जिया खानको मृत्यु भएको यतिका बर्ष पछि दिपिका आइन विवादमा ! कारण अचम्मको ! – Jagaran Nepal
आफ्नै साथी जिया खानको मृत्यु भएको यतिका बर्ष पछि दिपिका आइन विवादमा ! कारण अचम्मको !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण प्राय आफ्नो फेसन सेन्स, आउटिंग र धेरै कुराको कारण चर्चामा रहन्छिन्, तर यस पटक उनी केहि गलत कुराको कारण चर्चामा छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले दीपिका लाई सोशल मिडिया मा ट्रोल गरेका छन् ।
दीपिका पादुकोण ुद लिभ लभ लाफ फाउन्डेसनु को समर्थन मा आफ्नो केहि लुगा अनलाइन बेच्छिन्। यस वेबसाइट मा, तपाइँ अभिनेत्रीहरुले लगाएका लुगा पाउन सक्नुहुन्छ । हालै दीपिकाले आफ्ना केही कपडा बेचेकी छिन् जसमा प्रयोगकर्ताहरु रिसाएका छन् ।
दीपिकाले सेलमा लगाएको दुई कुर्ता निकालेकी छिन्। दीपिकाले अभिनेत्री जिया खानको अन्त्येष्टिमा लगाएको लखनौ कुर्ता बेच्ने वेबसाइटमा राखीन्। यस बाहेक, त्यहाँ अर्को कुर्ता छ जुन उनले प्रियंका चोपडाका बुबाको प्रार्थना सभामा लगाएकी थिइन् ।
एक प्रयोगकर्ताले दीपिकाको यो कुर्ता पछाडिको कथा बताउँदै लामो पोस्ट लेखेका छन्। केहि स्क्रीनशट पनि राखे। प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ूम धेरै स्तब्ध छु। मेरो मनपर्ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण द्वारा लिलामी गरीएको छ। उनले यो कुर्ता २०१३ मा धेरै अन्त्येष्टिमा लगाएकी थिइन् ।
सेकेन्ड ह्यान्ड चीजहरु किन किन्न्छन्। किन राम्रो संग बेच्दै हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ ? के तपाइँ यी गरीब व्यक्तिलाई लगाउन दिनुहुन्न ? मलाई भन्नुहोस् कि दीपिका यो परोपकार को लागी मात्र गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ यस प्रकारले लगाएको चीजहरु, एक गरीबलाई बेच्न सक्नुहुन्न वा घरमा काम गर्न सक्नुहुन्न।
एक अन्य प्रयोगकर्ताले लेखे कि दीपिकाको यो अभिनय धेरै सस्तो छ। यस्ता अभिनेताहरु धेरै प्रशंसक छन्। यो उनीहरुका प्रशंसकहरु हुन् जसले त्यस्ता चीजहरु पनि किन्नेछन्।